अबको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले शून्य सिटमा खुम्चिन्छ « Drishti News – Nepalese News Portal
अबको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले शून्य सिटमा खुम्चिन्छ
मेटमणि चौधरी, नेता, एकीकृत समाजवादी
५ माघ २०७८, बुधबार 4:27 pm
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा दुईपटक संसद विघटन गरेर देशलाई प्रतिगामी दिशातर्फ लान खोजेपछि नेकपा (एमाले)को ओरालो यात्रा शुरु भयो । ओली कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्न मात्रै होइन, सिंगो व्यवस्था नै ध्वस्त बनाउने मिसनमा रहेको ठहर गर्दै पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो र गठबन्धन सरकारले देशको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रतिगामनविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि एमाले दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । एमालेभित्र असन्तुष्टिको आवाज आगोझै फैलिरहेको छ । कतिपयले एमालेबाट विद्रोह नै गरेका छन् । कतिपय विद्रोहको तयारीमा छन् । एमाले छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । देशव्यापी प्रवेशको लहरले एकीकृत समाजवादीका नेता हौसिएका छन् । आगामी निर्वाचन, पाँचदलीय गठबन्धन, एकीकृत समाजवादी र एमालेको भविष्यबारे नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य एवं सांसद मेटमणि चौधरीसँग दृष्टिले गरेको संवाद:
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आगामी निर्वाचनमा देशकै निर्णायक शक्ति हुन्छ भन्दै आउनुभएको छ, त्यसको आधार के हो ?
आगामी चुनावमा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्णयक मात्रै नभएर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ । यसै क्रममा एकीकृत समाजवादीले नेपालमा भएको सबै कम्युनिष्टहरूलाई एकताबद्ध गरि नेतृत्व गर्ने प्रकृयासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । आजसम्म ३ वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग एकता गरिसकेको यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । थप अरू पार्टीहरूसँग एकताको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुलुकको प्रणाली जोगाउने विषयमा, कानुनी राज्य निर्माणमा र संवैधानिक सर्वाेच्चलाई स्थापित गर्नको लागि समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई संबोधन गर्न सकिरहेका छैनन र आफूलाई समयअनुसार बदल्नसमेत नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली समाजले नयाँ अनुभूति खोजिरहेको छ । यसको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मात्रै सम्भव हुने कुराको अपेक्षा जनताले गरिरहेका छन् र खासमा नेतृत्व पनि हाम्रो पार्टीबाट मात्रै संभव हुने भएकोले आगामी निर्वाचनपछि एकीकृत समाजवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
मुख्य कुरा इमानदार कार्यकर्ता हुन्, जो इमानदार छन् ती एमाले छाडेर हाम्रो पार्टीमा आएका छन् । जो लोभीपापी र भ्रष्ट आचरणका छन्, तिनीहरु एमालेमै छन् । तसर्थ, ढिलो चाँडो एमालेभित्रका इमानदार कार्यकर्ता हाम्रो पार्टीमा आउनेछन् ।
तर, विरोधीहरू त सत्ता गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रहेन भने एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ भन्छन् नि ?
अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन मुलुकको आवश्यकताले बनेको हो, कसैको लहड, कुनै व्यक्तिको इच्छा र चाहना पूरा गर्नको लागि यो गठबन्धन बनेको होइन । नेपालको संविधान, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको हो । यसैले यो टिक्छ र टिक्नु पर्दछ । जहाँसम्म अस्तित्व नै समाप्त हुने कुरा छ, कुनै पनि राजनीतिक दल एक्लाएक्लै चुनाव लडे भने समाप्त हुने हो । चाहे हामी, चाहे अरू जोसुकै होस । २०७४ सालको चुनावमा नेकपा (एमाले) ठूलो हुनुको कारण अरू राजनीतिक दलहरूसँग मिलेरै हो । माओवादी केन्द्रको १३ लाख मत थपेरै एमाले ठूलो भएको हो । यसैले राजनीतिमा मिल्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण रहेछ । आज नेकपा एमाले दैनिकजसो कमजोर बन्नुको कारण हो– उ एक्लै छ । त्यसैले सबैले आफ्नो राजनीतिक दलको रक्षा गर्ने हो भने मिल्नु बाहेक उपाय हुँदैन । यो सबैमा लागू हुने कुरा हो ।
एउटा उद्देश्यका लागि यो गठबन्धन बनेको हुँदा त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि मिल्नुपर्छ । ०४८ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट जननेता मदन भण्डारी र कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव लड्दा मदन भण्डारीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दुईवटा चुनाव कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिलेर जानुपर्छ भन्नुभएको थियो । तर, कांग्रेसले त्यो कुरा मानेन र भट्टराईले निर्वाचन हार्नुपर्याे । अहिलेको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ । ओलीले प्रतिगमनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी यो संविधान ध्वस्त बनाउने बाटोमा हिँडेका छन् । त्यसैले प्रतिगामी र पुर्नउत्थानवादी तत्व परास्त नभएसम्म वाम लोकतन्त्रवादी मिल्नुको विकल्प छैन ।
नेकपा (एमाले) भित्रको खास समस्या के हो ? ओली दक्षिणपन्थी अवसरवादी भासमा फसेकै हुन ?
केपी ओली भन्ने मान्छे घमण्डी, दम्भी, हठी र व्यक्तिवादमा रमाउने मूर्ख मान्छे हुन् । उनी कमजोरी स्वीकार गर्न नस्कने स्वाँठ हुन् । यिनी आफू त बर्बाद भए नै, सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै बर्बाद बनाए । यिनीसँग न कम्युनिस्ट दृष्टिकोण छ, न त आचरण नै । यिनी जत्तिको अक्षम मान्छे सायदै दुनियाँमा कोही होला । यिनी पूरै दक्षिणपन्थी भासमा डुबिसकेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यिनको कुनै कामै छैन । ओलीले एमालेलाई निजी कम्पनी बनाइसकेका छन् । त्यहाँ कुनै पनि फरक मतको कदर हुँदैन ।
योग्यता, क्षमता, अनुभवका आधारमा होइन, ओलीको जसले बढी चाकरी गर्छ उसैले एमालेमा जिम्मेवारी पाउने अवस्था छ । कम्युनिष्ट मुल्य–मान्यताअनुरुप अघि बढ्नेहरू एमालेमा रहन सक्दैनन् । बाध्यतावश एमालेमा बसेका इमानदार नेता, कार्यकर्ता क्रमशः त्यो पार्टी छाडेर समाजवादीमा आउँछन् । धेरै नेता, कार्यकर्तासँग हाम्रो सम्पर्क पनि भइरहेको छ ।
विगतमा ओलीका खरो आलोचक केही नेताहरूले एमाले छाडेपछि राजनीतिक भविष्य सकिन्छ भनेर विद्रोह गर्ने आँट गरेनन् नि ? तपाईं यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
राजनीतिमा विद्रोह भन्ने कुरा निकै थोरै मान्छेले मात्रै गर्न सक्छन् । हिजोको हरेक विद्रोहहरू पहिलेकोभन्दा असल र उन्नत समाज निर्माणको लागि भएको थियो । यदि, हरेक समाजमा विद्रोह नभएको भए आज हामी यो युगमा आइपुग्ने थिएनौँ । हामी वैज्ञानिक समाजवादी युगमा प्रवेशको तयारी पनि गरिरहेका छौँ । पूँजीवादी समाजमा विद्रोह अनिवार्य नै हुन्छ ।
तर, सत्य कुरा के हो भने– विद्रोहको शुरूको रूप सानो नै हुन्छ । पछि ठूलो रूप लिन्छ । जहाँसम्म १० बुँदाको कुरा छ– भिजनमा स्पष्ट नभएपछि विद्रोह नभएको हुनुपर्दछ । साथै, आँट र हिम्मत पनि नभएपछि मानिस विद्रोह गर्न डराँउछन् । आत्मसमर्पणको बाटो लाग्छन् । १० भाइको आत्मसमर्पण हो । जहाँसम्म भविष्य सकिने कुरा छ– हरेक विद्रोहले उन्नत समाज निर्माणका लागि भूमिका खेलेको हुन्छ ।
हामीले पनि त्यही गरेका छौँ । आजको समाजभन्दा अझ सुन्दर र उन्नत समाज निर्माणका लागि हामीले पनि भूमिका खेलेका छौँ । हाम्रो विद्रोहले हाम्रो मात्रै नभएर सिंगो नेपाली समाजको भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित भएको छ । हामीले एमालेबाट विद्रोह नगरेको भए यो संविधान ओलीले ध्वस्त बनाइसक्थे ।
एमालेबाट विद्रोह गरेर कांग्रेससँग सहकार्य किन नि ?
मैले माथि नै भनिसकेँ, यो संविधान ध्वस्त गर्न ओलीले दुईपटक संसद् भंग गरे । त्यसविरुद्ध हामी आन्दोलनमा उत्रियौं । सर्वोच्च अदालतले दुईपटक ओलीले गरेको विघटन सच्यायो । यस्तो बेलामा कांग्रेससँग सहकार्य नगरेको भए सायद नेपालको लोकतन्त्र जोगिनेवाला थिएन । अहिलेसम्म प्राप्त सबै उपलब्धि र अहिलेको प्रणाली समाप्त भइसकेको हुने थियो । कानुनी राज्य र संवैधानिक व्यवस्था समाप्त भइसकेको हुने थियो । यसैको रक्षाको लागि लोकतन्त्र र संवैधानिक मान्यतामा विश्वास गर्ने सबै राजनीतिक दल एकजुट भएको हो । विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने पनि परिवर्तनका लागि र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि वाम लोकतान्त्रिक शक्ति एक भएका छन् ।
२००७ सालदेखि ०६२/६३ को परिवर्तन कांग्रेससँगको सहकार्यमा सफल भएको हो । आन्दोलनको उपलब्धि रक्षाका लागि फेरि पनि समयले वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच एकताको आवश्यकता देखेरै यो गठबन्धन बनेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ, पाँचदलीय गठबन्धन कायम रहँदा र नरहँदा एकीकृत समाजवादीलाई कस्तो असर गर्छ ?
एकीकृत समाजवादी विद्रोहबाट जन्मेको पार्टी हो । यसको केही निश्चित मान्यताहरू रहेका छन् । इथिक्समा विश्वास भएपछि चुनाव हार्ने र जित्ने गौण कुरा हो । तर, आफ्नो इथिक्समा हिँडेपछि विजय चाहिँ अवश्य प्राप्त हुन्छ । हामीले स्थापनाको छोटो अवधिमै सबै जिल्लामा द्रुत गतिमा संगठन विस्तार गरिसकेका छौँ । एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नेहरूको देशव्यापी लहर चलेको छ । स्थानीय तहमा मात्रै होइन, हरेक निर्वाचनमा हाम्रो सशक्त उपस्थिति हुन्छ, हामी धेरै सिट जित्छौँ । किनभने, हाम्रो आधार भनेको गाउँगाउँका इमानदार कार्यकर्ता हुन् । जसले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । त्यही बलमा हिजो हामीले अधिकांश पालिका जितेका हौं । भोलि पनि जित्ने छौं ।
ठूला दलमा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षी धेरै हुन्छन्, कांग्रेसलाई एक्लै निर्वाचन जित्छु भन्ने लागेको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन कसरी टिक्छ ?
यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जोगाउन बनेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म मात्रै होइन, निर्वाचनपछि पनि रहन्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि गठबन्धनलाई दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउने निर्वाचन प्रणाली हाम्रोमा छैन । मानौ, सत्तारुढ दलको गठबन्धन भएन भने पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चालगायत राजनीतिक दलसँग सहकार्य हुन्छ । यो गठबन्धनले नेपालमा सबैभन्दा धेरै मत होल्ड गर्छ । जहाँसम्म सिटको सख्या छ– सबैभन्दा धेरै सिटमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक समीकरण नै विजय हुन्छ । किनभने, हामी देश र जनताप्रति इमान्दार छौं ।
तपाईंले एमालेबाट निर्वाचन जित्नुभयो, अहिले एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ ? आगामी निर्वाचन तपाईंले जित्नुहुन्छ ?
नजित्ने त कुरै भएन । जित्छु । मैले जनतालाई झुठो गफ गरेर चुनाव जितेको होइन, निरन्तर जनतासँगको सम्पर्कमा छु । जनताको दुःख, सुखलाई आफ्नो ठानेको छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र होइन, देश दौडाहा गरेर प्रतिगमनको विरोधमा उभिएको छु । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसले किन ध्वस्त बनाउन खोज्यो भन्ने कुरा जनतालाई प्रष्टसँग भनेको छु । ओलीले ध्वस्त बनाएको कम्युनिष्ट आन्दोलन सुदृढीकरणमा लागेको छु ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले कति सिट जित्ला ? एमालेको स्थिति कस्तो हुन्छ ?
एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक समीकरणले सबैभन्दा धेरै सिटमा विजय हासिल गर्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसको आधार भनेको पनि गठबन्धन नै हो । जहाँसम्म एमालेको कुरा छ– प्रत्यक्षतर्फ शून्य सिटमा खुम्चिन्छ ।
एकीकृत समाजवादीको शक्ति आफू जित्न होइन, एमालेलाई हराउन मात्रै हो भन्छन नि ?
एकीकृत समाजवादी निर्वाचनमा आफू जित्छ । एमालेलाई हराउनै पर्दैन । उ आफै बिर्सजनको अवस्थामा पुगिसकेको छ । एमाले त आफै विघटन हुन्छ । दुईतिहाइ भुइँ न भाँडो बनाएको एमालेले जनताबीच के मुख देखाएर भोट माग्छ ? एमालेले त नैतिक धरातल नै गुमाइसकेको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल पनि तपाईंकै जिल्लाबासी हुनुहुन्छ । आगामी निर्वाचनमा उहाँको स्थिति कस्तो रहन्छ ?
शंकर पोखरेल चुनाव लड्ने आँट गर्न सक्नु हुन्न । चुनावबाट भाग्नु हुन्छ । हेर्दै जानुस– देश डौडाहा गर्नुपर्छ भनेर उहाँ चुनावबाट भाग्नु हुन्छ । लडे पनि जमानत जोगाउन सक्नु हुन्न । उहाँ प्रतिगामी हो, हामी अग्रगामी हौं ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनले कति सिट जित्छ ? शीर्ष नेताहरूले गरेको सहमति प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हुबहु पालना गर्लान् ?
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनले सबै सिटमा जित्छ । मतलाई आधार मान्ने हो भने हामी सबै प्रदेशमा अगाडि छौँ । प्रतिगामी, दक्षिणपन्थी अवसरवादी ओली प्रवृत्तिविरुद्ध र प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन तल्लोसहसम्मै मजवुद छ । निर्वाचनमा गठबन्धनको मत तलमाथि हुँदैन । एमाले शून्यमा झर्छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको छ । भारतसँगको सीमा समस्या कसरी समाधान गर्ने ? सत्तारुढ गठबन्धनले के सोचिरहेको छ ?
कुटनीतिक माध्यमबाट छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । जहाँसम्म लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको कुरो छ, यो भारतको दादागिरी हो । हेपहा प्रवृत्ति हो । सार्वभौम मुलुक चाहे सानो होस या ठूलो, सबैको बराबरीको हक हुन्छ । यदि, भारतले कानुन विपरित आफ्नो गतिबिधि गरिरह्यो भने यसको सशक्त मुकाबिला गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर नेपाल बारले आन्दोलन गरेको झण्डै तीन महिना भयो । दलहरु किन बोल्दैनन् ?
न्यायालयलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भए उनीमाथि संसद्मा महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्छ । सायद, सत्ता गठबन्धनसँग प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन दुईतिहाइ बहुमत नभएर होला, महाअभियोग दर्ता नभएको । त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा उचो नैतिकता हो । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए राम्रो हुने थियो ।